Ungandibatsira here kuti ndiwane imwe mahara Amazon keyword tool?
Taura zviri nyore, kana uri kutengesa kuAmazon - pane nguva yakawanda kukuitira iwe, kunyanya kutarisira, uye zvakanyanya kutarisa. Uye dzimwe nguva zvinenge zvisingakwanisi kutarisirwa, zvichida kunze kwekunyatsotevera kutevera uye kuongorora masangano. Nenzira yakanaka, kune mhando dzakasiyana-siyana dzakasiyana-siyana dzinowanikwa mukusununguka kuIndaneti - uye pasi ini ndiri kuenda kukubatsira kusarudza kodzero isina majeki Amazon keyword tool. Kusiyana nemajini makuru ekutsvaga akafanana neGoogle pachake, Amazon's search ranking algorithm yakatonyanya kuvimba ne-yakadzika keyword kutsvakurudza-kunyanya nekuda kwekukwikwidzana kwakasimba, uye niches ine chaizvo zvigadzirwa zvinowanikwa zvinowanzoverengwa nezviuru zvevatengesi shure kwezvose. Uye heyi vatatu vakachenjera vanobatsira paIndaneti kukubatsira nebasa racho - bilgisi olmak ingilizce. Ndizvo zvangu zvinoonekwa kuti iwe unogona kusarudza chero. Mushure mezvose, zvinongomirira iwe kuti usarudze kuti ndeipi maAmerica keyword tool yekushandisa pakudhinda kwako kutumira.
Iyi software haisi chinangwa chimwechete-chinyorwa chekutsvakurudza kwekukwikwidzana, asi purogiramu yakazara yehutano hwakanaka uye hunobatsira. Kunze kwepakutanga mashoko ezvinyorwa zvinyorwa, Keyword Inspector inewo Keyword Trends Tool iyo inogona kukubatsira nekunzwisisa mazano uye mazano mazano pamusoro peiyo mazwi makuru anoshandiswa nevekutengesa chaiyo pa Amazon. Ichi chinyorwa chinopawo Indexation Tester, ruoko rwako rwakanakisisa runobatsira kana zvasvika pakutsvaga kwechokwadi kuti zvose zviripo uye kunyora kwako kwakaratidzwa zvakanaka. Nokudaro maitiro ako anogona kuwanikwa nyore nyore nechinangwa chevateereri vako. Pakupedzisira, iyi mahasa Amazon keyword tool inogona kutsigira bhizimisi rako reEcommerce ne Amazon Suggestion Tool (kuti uone yakavimbiswa kwenguva yakareba muswe keywords nemitsara), uyewo Amazon Search Terms Optimizer Tool (kuti uone kuti kutsvaga kwako kuonekwa kunosimudzirwa kune chinonyanya kukwirira).
Chimwe chinhu chakanakisisa uye chisingabhadhari Amazon keyword tool, Merchant Words inoratidzira mitsipa yakasimba zvikuru painouya pakubatsira kutsvakurudza mashoko uye zvichida zvakanakisisa mazano pamusoro pezvinyorwa zvakakosha-mazwi anoshandiswa nevatengi vechokwadi kutsvaga kwezuva nezuva kunze uko. Chinhu ichocho ndechokuti mashoko anokosha anopiwa nerurimi urwu haagoni kungoenderana nehutauriri hweAmerica asi hunofukidza huwandu hwepakati nemamwe mashoko chaiwo uye kushandiswa kwezvinhu zvinowanikwa kune dzimwe nzvimbo dzekutumira ecommerce website, dzakadai seWalmart, Jet, nezvimwe ( 1)
Uye pano pakupedzisira inouya chigadzirwa chekupedzisira, nguva ino ndinogona kuronga kuedza software yakanaka uye inobatsira yekutengesa mitengo kuAmazon, pasina kuisa chimwe chinhu chinongotarisa pamusoro pezvinyorwa chete. Mushure mezvose, kutarisa mitengo ndeimwe nzira inokosha yakakosha iyo inofanira kushandiswa kune rimwe doro-kutengesa dare, hongu, kana iwe uchida kuti ive yeruzivo rwemabhizimisi chaiwo. Pakati pemakona akakwirira anowanikwa neKepa, unogona kuona mazita emagetsi emitengo yakatarwa, kugadzika kuwanikwa kwemashoko kana kudonhedzwa kwematengo, kuwana ruzivo rwekuchengetedza ruzivo kubva kune browser yako, kuronga kuenzanisa nekuongorora, pamwe nekuongororai zvinhu zvinowanzoitika. Chimwe chinhu chakasiyana chinopiwa nemutengo wekutengesa iri mutengo wenhoroondo inowanika kune gumi nemaviri akasiyana.